Tag: ọrụ ndị dabere na ọnọdụ | Martech Zone
Kpido: ọrụ dabere na ọnọdụ
Fraịdee, Nọvemba 30, 2012 Wednesday, November 28, 2012 Douglas Karr
Enweela ọtụtụ ihe akaebe na mmetụta nke ekwentị na ụdị azụmaahịa a na-erekarị, mana ekwesịrị ịmara na omume ndị na-elekọta ndị na-ere ahịa (MoSoCo) na-enwe mmetụta dị ukwuu na ụlọ oriri na ọ restaurantụ andụ na ọrụ ndị ọbịa. Ngwa nyiwe na mbadamba nkume aburula ngwungwu nke mmeghari ohuru a na teknụzụ, ya mere o bughi ihe ijuanya na ulo nri, nri & ile obia na-ejide ihe site na itinye na nke a.
E gosipụtara ụfọdụ ọmarịcha stats dị egwu na nnabata nke Geosocial na Ọnọdụ Dabere na Ọrụ (LBS) site na ngwaọrụ mkpanaka ka ekpughere na inforgraphic a site na Flowtown - Ngwa Ngwaahịa Mgbasa. N'ime 58% nke ndị ọrụ smartphone na-eji ọrụ ndị a. Ihe omuma ihe na-akowa oru nile dika: Geosocial IZIR --TA - ofdị ịkparịta ụka n'socialntanet na-eji ọrụ na ike ala, dị ka geocoding na geotagging, iji mee ka mmekọrịta ndị ọzọ nwee mmekọrịta. Ọrụ Ndị Dabere na Ọnọdụ - ụdị ozi a